ရဲမ်ားက အရက္မူးၿပီး ျပည္သူတစ္ဦးအား ဖမ္းဆီး ႏွိပ္စက္ရံုမကပဲ ေဘာင္းဘီစြဲခၽြတ္ကာ ဖင္ခ်ခိုင္းတဲ့အထိ ရုတ္မာမႈ - POPPIN NEW
May 15, 2019 ျပည္တြင္းသတင္း
ျပည္သူ ့ဝန္ထမ္း အမည္ခံထားေသာ ရဲမ်ား၏ ရြံဖို ့ေကာင္းတယ့္ ေစာက္က်င့္မ်ားကို သိေစခ်င္ပါတယ္၊ က်ြန္ေတာ္ ခံခဲ့ရတာနဲ ့ပတ္သတ္လို ့တရာဆြဲလည္း လူပင္ပန္း စိတ္ပင္ပန္း ေငြကုန္တာကလြဲလို ့ဘာမွ မထူးနိုင္မွန္းသိပါတယ္
ကြ်န္ေတာ္ ျပီးခဲ့တယ့္အပတ္ ၃.၅.၂၀၁၉ Friday ရက္ (၁၀း၃၀)အခ်ိန္ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ဦးႏွင့္ အတူစမ္းေခ်ာင္းရိွစားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုမွ အငွားကား(TAXI)ျဖင့္ ေနအိမ္သို့့ျပန္လာစဥ္ နာနတ္ေတာလမ္းအရိုးအထူးကုေဆးရုံၾကီးအနီးတြင္ ညဘက္ ယာဥ္စစ္ေနေသာ
ကၽြန္ေတာ္သည္ ရဲ၀န္ထမ္း၏ စစ္ေဆးျခင္းကို ၾကည္ျဖဴစြာခံျပီးေနာက္ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ မိမိကိုစစ္ေဆးေသာ ရဲ၀န္ထမ္းအား ကၽြန္ေတာ္မွ “ခင္ဗ်ားမူးေနတာလား၊အလုပ္ခ်ိန္မွာယူနီေဖာင္းဝတ္ျဖင့္ မူးေနလို့ရပါသလား
ကျွန်တော့် ရဲ ့ကိုယ်တွေ ့အဖြစ်ပျက် တစ်ခု Share ချင်ပါတယ်။ အများလည်းသိရအောင် နောက်နောင်လည်း ကျွန်တော့လို မခံရစေချင်ပါဟူး။ အဲ့ရည်ရွွယ်ချက်နှင့် အတူ မပြောင်းလဲနိုင်သေးသော….
ပြည်သူ ့ဝန်ထမ်း အမည်ခံထားသော ရဲများ၏ ရွံဖို ့ကောင်းတယ့် စောက်ကျင့်များကို သိစေချင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော် ခံခဲ့ရတာနဲ ့ပတ်သတ်လို ့တရာဆွဲလည်း လူပင်ပန်း စိတ်ပင်ပန်း ငွေကုန်တာကလွဲလို ့ဘာမှ မထူးနိုင်မှန်းသိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မလုပ်လို ့လည်း မရပါဟူး။ ကျွန်တော် တိုင်စားများအနေနဲ ့သတ်ဆိုင်ရာ ဌာနများ ဝန်ကြီးရုံးများကိုတော့ ပို့ပြီးပါပြီ။ အရေးယူမယ် မယူမယ်ကတော့ သူတို ့အပိုင်းပါပဲ။အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ် …
ကျွန်တော် ပြီးခဲ့တယ့်အပတ် ၃.၅.၂၀၁၉ Friday ရက် (၁ဝး၃၀)အချိန် သူငယ်ချင်းနှစ်ဦးနှင့် အတူစမ်းချောင်းရှိစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှ အငှားကား(TAXI)ဖြင့် နေအိမ်သို့့ပြန်လာစဉ် နာနတ်တောလမ်းအရိုးအထူးကုဆေးရုံကြီးအနီးတွင် ညဘက် ယာဉ်စစ်နေသော…..
ထို့နည်းတူတခြားသော(လက်နက်ကိုင်ဆောင်ထားသော) ရဲဝန်ထမ်းအချို့မှာလည်းမူးနေပါသည်။ ၄င်းတို့နှင့်အတူတာဝန်မူးဟုယူဆရသူ အရာရှိတစ်ဦးလည်းရှိနေပါသည်။
ယခုကဲ့သို့မူးနေသောအနေအထားဖြင့် ပြည်သူတစ်ဦးကို စစ်ဆေးခွင့်ရှိပါသလား” ဟု ကျွန်တော်မေးခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်မေးသောအခါ ၄င်းတို့နှင့်အတူရှိနေသောရဲအရာရှိမှကျွန်တော့်အား ပြစ်မှုတစုံတရာမရှိိှသည့် အတွက်ကျွန်တော့်အားပြန်ရန် တိုက်တွန်းနေချိန်တွင်…..
ကမာရွတ်ရဲစခန်းဝန်း အတွင်းအရောက်တွင် ကျွန်တော့်အား ကားပေါ်မှဆွဲချကာ စခန်းအတွင်းသို့ခေါ်ဆောင်လာပြီးအချုပ်နားအရောက်တွင ်ကျွန်တော့်ကိုခေတ္တစောင့်စေပြီး အချုပ်ထဲတွင်ရှိနေပြီးသောအချုပ်သားများနှင့်အချုပ်လမး်တွင််အိပ်နေသောသူများကိုအပြင်သို့ခေါ်ထုတ််သွားပြီး ….
“မင်းငယ်ပါ ဘယ်လောက်ရှိလဲကြည့်ရအောင်” ဟုဆိုကာ ကျွန်တော့် ဘောင်းဘီအားအတင်းဆွဲခြင်း၊ “ဒီကောင့်ကိုဖင်ချကွာ”ဟုဆိုကာဘောင်ဘီအားအတငး်ဆွဲခြင်းများကိုပြုလုပ်ပါသည်။ ထို့နောက်အချုပ်ခန်းအတွင်းသို့ကျွန်တော့်ကိုဝင်စေပြီးအခန်းအတွင်းတွင် အသင့်စောင့်နေသော ရဲ၂ဦးမှာ လူမိုက်ဆန်သောစကားများဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ပြီး လက်ထိတ်မဖြုတ်ပေးပဲ နေစေခဲ့ပါသည်။
ထိုနေ့ည၂၄းဝဝနာရီခန့်တွင် ကျွန်တော့်အား အချုပ်မှပြန်ထွက်စေပြီး ထိုအချိန်တွင် ကျွန်တော့်အားထိုးနှက်ခြိမ်းခြောက်သူ ရဲဝန်ထမ်းတစ်ဦး မှ မရှိတော့ပဲကနဦးကတည်းကပင် ရှိနေခဲ့သော ရဲအရာရှိနှင့်စခန်းတွင်ရှိနှင့်ပြီးသော ရဲဝန်ထမ်းများသာတွေ့ရပါသည်။
ဖခင္အရင္းျဖစ္သူက သမီးႏွစ္ေယာက္လံုးကို ကေလးရတဲ့အထိ သားမယားျပဳက်င့္ေနမႈ
Pop Pin New March 12, 2019
၁၄ ၾကာမပုပ္မသုိးသည့္ ဆရာေတာ္ႀကီး ႐ုပ္ကလာပ္ေတာ္ကိစၥ အျငင္းပြားေနျပီ